घर मा पनीर कसरी खाना पकाउनु?
मानव जीवनमा डेयरी उत्पादन एक विशेष स्थान छ। दूध - यो सिर्फ प्रोटिन, क्याल्सियम, तर पनि भिटामिन र लैक्टिक एसिड को एक जटिल, आवश्यक हाम्रो शरीर को काम पूरा गर्न होइन। डेयरी उत्पादन को सबै विशाल विविधता Amidst, तपाईं सबैभन्दा आधारभूत चयन गर्न सक्नुहुन्छ - यो दूध, खट्टे क्रीम, घरेलु पनिर, घिउ, क्रीम छ। द्वारा-उत्पादनहरु दूध उत्पादन र मक्खन छांछ (defatted दूध, दूध देखि क्रीम हटाउने उत्पादित छ जो)। churning पछि पनि, बाहिर स्वादिष्ट दुग्ध उत्पादन उत्तेजित गर्दछ, Tatars यो "आर्य" कल खैर, शायद अरू कसैले यसलाई गर्नुपर्छ।
यी सबै बीच प्रोटिन र क्याल्सियम को उच्च सामग्री छ किनभने विशेष ध्यान, curds चाहनुहुन्छ भुक्तान छ। यो विशेष गरी जो musculoskeletal प्रणाली संग समस्या ती लागि, छोराछोरी र वयस्कहरूको लागि धेरै उपयोगी छ।
धेरै शायद रुचि थिए कसरी पनीर बनाउन घरमा। म पनि, यो रोचक थियो, त्यसैले म यो प्रक्रिया अध्ययन गर्ने निर्णय गरे। रूपमा घरेलु पनिर हुनत एक औद्योगिक वातावरण हो, र यो मेरो पेशा को भाग हो किनभने म, अघि देखि थाहा छ। अब म तपाईंलाई बताउन कसरी घर मा पनीर बनाउन हुनेछ।
तरिका को एक धेरै, हामी सबैभन्दा तिनीहरूलाई को पहुँच विचार गर्नुहोस्।
1) हामी ताजा मक्खन वा दही को कुनै पनि नम्बर आवश्यकता हो, म दही को 1.5 लिटर छ। एक ठूलो पट लिन, यो एक सानो पानी खन्याउन र जोश गर्न ल्याउन। हामी एक पानी स्नान रूपमा आवश्यक छ। एक हत्येदार बरतन हाम्रो सानो दही खन्याउन र ठूलो एक मा राखे। अब यसरी यो अन्यथा कडा चीज प्राप्त, जोश छैन दही गर्न आवश्यक छ, यो अलग सीरम गर्न सुरु गर्दा हामी प्रतीक्षा गर्नुहोस्। सारा प्रक्रियाको बारेमा आधा एक घण्टा, कहिलेकाहीं अलि लामो समय लाग्छ। त्यसपछि, सारा ठूलो चलनी मा हालिएको छ (साना प्वालहरू भएको) र जब सारा सीरम नाली फर्वार्ड। तपाईं अन्यथा गर्न सक्छन्: gauze एक झोला प्रयोग गर्न, तर यो सीरम अब एक सानो चीज selfpressing बग्छ र। यो नुस्खा अनुसार, यो कोमल र स्वादिष्ट बाहिर जान्छ।
कसरी खाना पकाउनु घरमा पनीर अब तपाईंलाई थाहा छ, हामी दूध प्रयोग एक विधि विचार गर्नुहोस्।
2) हामी दूध एक दफ्ती आवश्यकता हो, खट्टा क्रीम को दुई चमचा topped। दूध एक फोडा गर्न ल्याउन (तर जोश छैन), त्यसपछि कोठा तापमान गर्न cooled, र क्रीम संग मिश्रित। हामी न्यानो ठाउँमा एक रात मा राखे। बिहान अमिल्याएर मिश्रण प्राप्त। एक पानी स्नान मा गर्मी र पनीर प्राप्त। अब तपाईं सुरक्षित नातेदार सिकाउन सक्छन् कसरी दूध देखि पनीर बनाउने।
प्रयोग घरेलु पनिर को उत्पादन को लागि एक औद्योगिक वातावरण मा क्याल्सियम क्लोराइड। उहाँले दूध को तीव्र coagulation योगदान पुग्छ।
सामान्य मा, परम्परा अनुसार, हाम्रो हजुरआमा कसरी घर मा पनीर बनाउन थाह थियो। नियम, गाउँमा सबैलाई एक गाई राख्न। दूध सधैं यो अमिलो उत्तेजित गर्दछ, पिउन छ। त्यो मेरो हजुरआमा soured के दूध, सबै भन्दा प्राकृतिक र घर पनीर प्राप्त गर्न गरम छ छ। कहिलेकाहीं दूध आफ्नो घरेलु पनिर बाट खाना पकाउनु विशेष खट्टे गर्न बाँकी छ।
आज, त्यहाँ जो गाई गरेको दूध समावेश केही छन्, तपाईं कुनै पनि भण्डारमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, तपाईं आफैलाई पनीर आफैलाई गर्न सक्नुहुन्छ। को curd प्राप्त उत्कृष्ट cheesecake बाटो द्वारा। तिमी प्यारो चीज को एक किसिम पकाउन सक्नुहुन्छ (यो बच्चाहरु विशेष गरी खुसी छ, र वयस्क खान averse छैनन्)।
खैर यो बाहिर जान्छ घरेलु पनिर खाजा, यो धेरै सरल खाना पकाउन। हामी हाम्रो ताजा पनीर नुन संग मिश्रित छ लिन (नूनिलो चाहने - सानो - छैन जो धेरै अधिक नुन राख्न)। सबै हामी फारममा आटा र प्रसार वा पारंपरिक प्लेट मिश्रण। Extruding र पनीर परिपक्व गर्दा दिन को एक जोडी प्रतीक्षा गर्नुहोस्। परिणाम Adygei पनीर (यो बाटो द्वारा, परंपरागत बनाइएका समान कुरा हो भेड गरेको दूध)।
गर्मी मा राम्रो तरिकाले जान्छ कि र तयार ताजा पेय - को सीरम लागि जाँदा, त्यसपछि यो सम्भव, उदाहरणका लागि, पेय पदार्थ को एक किसिम तयार चीनी, कुनै पनि फल को रस संग मिश्रण छ।
खैर, अब तपाईं निश्चित को प्रश्न गर्न विस्तृत जवाफ दिन कसरी पनीर बनाउन घर मा, र के यो हाम्रो शरीर को लागि उपयोगी छ।
गोभी KOHLRABI - एक मूल्यवान खाद्य उत्पादन
कुटपिट मा कीमा बनाएको मासु, एक पैन मा तला को स्टेक
पकौडी संग चिकन सूप: नुस्खा
को langoustines कसरी खाना पकाउनु: व्यञ्जनहरु। Scampi स्थिर
शब्द: "पिता" भनिन्छ। एक शिक्षक रूपमा बुबा
गर्भवती Theraline लागि तकिया: यो उनको मा विकल्प बन्द गर्न आवश्यक छ किन?
मुख्य देशहरूमा गाई फैलाउन - मानवता को benefactors
चिकित्सा "Difenin": analogues, दबाइ को पर्यायवाची। "Difenin" के प्रतिस्थापन गर्न सक्छ?
मान्छे को एक धेरै: सपना पुस्तक। सपना को अर्थ र व्याख्या
जीव को कारक अत्यावश्यक कार्यहरु सीमित: प्रकाश, पानी, तापक्रम
पेट्रो सेन्ट सेराफाम पवित्र: आइकन, प्रार्थना, फोटो